Rockdị okwute, nhazi na njirimara | Netwọk Mgbasa Ozi
Rockdị nkume, nhazi na njirimara
Taa, anyị ga-ekwu maka isiokwu geology. Ọ bụ ihe ụdị nke nkume nke dị. Kemgbe e kere ụwa anyị, a kpụrụwo ọtụtụ nde nkume na mineral. Dabere na mbido ha na ụdị ọzụzụ ha, enwere ọtụtụ ụdị. Enwere ike ịkọwa nkume niile dị n'ụwa atọ dị iche iche: nkume ndị na-ere ọkụ, nkume ndị na-edozi ahụ na nkume metamorphic.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ụdị ụdị nkume dị adị, ọnọdụ ha na njirimara ha, nke a bụ post gị 🙂
1 Sedimentary nkume
1.1 Detrital sedimentary nkume
1.2 Nkume ndị na-enweghị mmiri ozuzo
2 Nkume nzuzu
2.1 Nkume Plutonic
2.2 Nkume mgbawa ugwu
3 Metamorphic nkume
Anyị ga-amalite site na ịkọwa nkume dị egwu. Ya guzobere bụ n'ihi iga na deposition nke ihe ruru ka omume nke ikuku, mmiri na akpụrụ mmiri. Ha enweela ike iji mmiri ọgwụ debe ha na mmiri mmiri. Ka oge na-aga, ihe ndị a na-agbakọta ọnụ ma ghọọ nkume. Ya mere, a na-eji ọtụtụ ihe mejupụta nkume sedimentary.
N'aka nke ya, a na-ekewa nkume sedimentary n'ime detrital na enweghị nke detrital
Detrital sedimentary nkume
Ndị a bụ ndị na-akpụ site na sedimenti nke iberibe okwute ndị ọzọ mgbe ebuputara ha na mbụ. Dabere n’otú iberibe okwute ndị ahụ hà, a na-achọpụta ha n’otu ụzọ ma ọ bụ n’ụzọ ọzọ. Ọ bụrụ na o kwuru iberibe buru ibu karịa 2 mm ma gbaa gburugburu ka a na-akpọ conglomerates. N'aka nke ozo, oburu na ha angular anakpo ha oghere.
Ọ bụrụ na iberibe iberibe okwute ndị ahụ atalata, a na-akpọ ha gravel. Ikekwe, ị nụtụla banyere ajịrịja nkume. Mgbe ole pere mpe karịa 2mm ma bukarịa 0,6mm, ya bụ, iji anya gba ọtọ ma ọ bụ jiri onyonyo onyoonye a na-akpọ ha sandstones. Mgbe iberibe iberibe okwute pere mpe nke na anyị chọrọ microscope elektrọn, a na-akpọ ha silts na ụrọ.
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji gravel eme ihe maka mkpokọta na ihe owuwu na imepụta ihe. A na-eji conlomerates na sandsture mee ihe maka ogologo oge ha na-ewu ihe. A na-eji ụrọ eji arụ ọrụ na ndụ anyị kwa ụbọchị yana maka ịgwọ ọrịa na ịchọ mma. Ejikwa ha maka iwu brik na seramiiki. Ngwongwo ha na-egbochi mmiri na-eme ka ha zuru oke maka ịmị ngwaahịa na-emerụ emerụ na nzacha na ụlọ ọrụ. A na-eji ha dị ka akụrụngwa maka iwu apịtị na mgbidi adobe na imepụta iberibe ite ụrọ, ụrọ kpụọ na poselin.
Nkume ndị na-enweghị mmiri ozuzo
Typesdị okwute ndị a bụ site na Mmiri nke ụfọdụ mmiri ọgwụ na ngwọta mmiri. Fọdụ n'ime ihe ndị sitere n'okike nwere ike ịgbakọ ma mepụta nkume ndị a. Otu n'ime nkume ndị a na-ahụkarị na nke a ma ama nke ụdị a bụ limestone. Emebere ya site na mmiri ozuzo nke calcium carbonate ma ọ bụ nchịkọta nke mpekere skeletal nke coral, ostracods na gastropods.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịhụ iberibe ihe ochie na ụdị nkume a. Ihe atụ nke nkume limestone bụ ihe nlekọta. Ọ bụ nnukwu porous nwere osisi hiri nne ma na-esite na osimiri mgbe calcium carbonate na-ebute ahịhịa.
Ihe omuma atu ozo bu ndi dolomites. Ha dị iche na nke gara aga na ọ nwere ihe mejupụtara kemịkal nwere ọdịnaya magnesium dị elu. Mgbe nchịkọta nke mkpoko nke ihe ntule na-eme site na silica, a na-akpụ nkume ndị na-akpụ akpụ.
E nwekwara ụdị okwute n'ime ihe na-abụghị ngbasapụ oku evaporitic. A na - eme ha site na mmiri nke mmiri na gburugburu mmiri na apiti mmiri ma ọ bụ ọdọ mmiri. Nkume kachasị mkpa n’otu a bụ gypsum. A haziri ha site na mmiri ozuzo nke calcium sulfate.
A na-eji nzu nzu emepụta ciment na wayo na arụ ụlọ. Ha bụ ihe eji eme ihe maka ihu na mkpuchi nke ụlọ. Kol na mmanụ bụ ụdị nke nkume na-anaghị emerụ ahụ oku organogenic. Aha ya bu n'ihi na o sitere nchikota nke ihe di iche iche na ihe ndi ozo. Ọ bụ ezie na kol na-abịa site na irighiri ihe ọkụkụ, mmanụ sitere na plankton mmiri. Ha nwere nnukwu mmasị akụ na ụba n'ihi oke uru ha bara ụba maka ọgbọ nke ume site na combustion.
Nke a bụ ụdị nkume nke abụọ. Ha na-site na obi jụrụ nke mmiri mmiri nke silicate mejupụtara na-abịa site n'ime ụwa. Igwe a wụrụ awụ dị oke okpomọkụ ma na-ewusi ike mgbe ọ ruru elu ụwa. Dabere na ebe ha dị jụụ, ha ga-enye ụdị nkume abụọ.
Ndị a na-amalite mgbe mmiri mmiri dị jụụ n'okpuru elu ụwa. Nke ahụ bụ, na-edo onwe ya n'okpuru nrụgide dị ala, mineral ndị dị n'ime na-etokọta ọnụ. Nke a na-akpata oké, na-abụghị porous nkume na-etolite. Igwe jụrụ nke mmiri mmiri dị oke nwayọ, yabụ kristal nwere ike buru oke ibu.
Otu n'ime nkume a kacha mara amara nke ụdị a bụ konkiri. A na-agụnye ha na ngwakọta nke mineral nke quartz, feldspars na mica.
Nkume mgbawa ugwu
Formeddị a na - akpụ mgbe mmiri mmiri na - ebupụta na mpụga nke ụwa ma dị jụụ ebe ahụ. Ndị a bụ okwute ndị na-etolite mgbe lava sitere na ugwu mgbawa na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide belata. Kristal dị na nkume ndị a pere mpe ma nwee amorphous nke na - enweghị ike ịkpụcha iko.
Otu n'ime ihe ndị kasị Ugboro na mfe ịmata ha bụ basal na pumice.
Nkume ndị a sitere na nkume ndị dịbu adị ugbua site na ịgafe okpomọkụ na nrụgide na-abawanye site na nhazi usoro ala. Mgbanwe ndị ụdị nkume ndị a tara ahụhụ mere ka ha gbanwee ihe mejupụtara na mineral. Usoro a na-eme na steeti siri ike. Okwute ekwesịghị ịgba agba.
Imirikiti okwute metamorphic na-ahụkarị ihe na-akụda ihe ndị ha na-eme nke na-eme ka nkume ahụ dị larịị. A na-akpọ mmetụta a foliation.
Nkume ndị a kacha mara amara bụ slate, marble, quartzite, gneiss, na schists.
Maraworị nke ọma ụdị nkume ndị dị adị na usoro usoro ha. Ugbu a ọ bụ aka gị ka ị gaa n'ọhịa wee mata ụdịrị nkume ị na-ahụ wee chọpụta ma etu esi ahazi ha na usoro ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Rockdị nkume, nhazi na njirimara
Joaquin Adarmes Hernandez dijo
Ọmụmụ ihe a na-adọrọ mmasị, m nọ na San Sebastian de los Reyes nke Aragua State, Venezuela na enwere ugwu ugwu dị mkpa na mineral ndị ọzọ na usoro nke ọgba na nnukwu chara mma n'ihi na m ga-achọ ịmatakwu banyere njirimara na ụdị nke mineral ndị dị n'ọgba ndị a mara mma.
Zaghachi Jose Joaquin Adarmes Hernandez
Kedu ihe bụ oge ala na otu esi atụ ya?
Kedu ihe na-agbanwe mmejọ na kedu ka esi hibe ha